Awwa ductile vy miendrika mitsoka fampiasana
LEYONSTEEL Ductile Iron Pipa, fizarana LEYONSTEEL Cast Iron Pipo Company, dia mpamokatra fantsom-by vy vita amin'ny ductile ho an'ny indostrian'ny rano. LEYONSTEEL Fantsona Ductile Iron manome:
Fihetsika avo lenta
LEYONSTEEL Fantsakan-tsoavaly LEOONSTEEL dia manana tanjaka mahery vaika sy fahasosorana hiatrika ireo fahatairana izay matetika sendra amin'ny fitaterana, ny fikarakarana ary ny fametrahana. Ireo toetra ireo koa dia manome fiarovana fanampiny amin'ny fihenan-tsain'ireo tohanan'ny rano, fifamoivoizana be ary ny hery ratsy tsy ampoizina. Ny fanoherana fiantraikany tsara dia voamarina amin'ny fitsapana vita amin'ny elanelana mahazatra mifanaraka amin'ny fenitra ANSI / AWWA C151 / A21.51.
Fikajiana ny vidin'ny angovo sy ny paompy ambany kokoa
Ny fatiantoka lohany amin'ny fantson-drano dia mifamatotra mivantana amin'ny diametaly ao anatiny, ary ny fanjifana angovo sy ny vidin'ny pumping dia mifandraika mivantana amin'ny fatiantoka amin'ny loha. Noho izany, ny fampiasana fantsona vy vita amin'ny ductile manana diaméter lehibe noho ny nominal dia mety hiteraka fitahirizana angovo lehibe mandritra ny taona maro. Ho fanampin'ny fanampiana ny fitazonana ny vidin'ny fandidiana sy ny vidin'ny fampiasana azy dia ilaina ihany koa ny fitehirizana ny angovo ho an'ny tontolo.
LEYONSTEEL dia mampiasa fitambaran'ny famakafakana simika sy fitsaboana hafanana mba hamokarana fantsona misy tanjaka sy faniriana tsara - fantsona iray izay mahatohitra ny tsindry anatiny sy fanarona lalina - fantsona manome fahatokisana sy fiarovana bebe kokoa amin'ny toe-javatra mahazatra sy tsy mahazatra, toy ny tany mivelatra ary fihetsehana an-tany noho ny fandefasana sy ny fikororanana.
Azo antoka fa ho velona velona tokoa
Ireo firaketana ara-tantara dia nandrakitra taonjato maro ny porofo nanaporofo ny serivisy vita amin'ny vy vy. Ny fizotran'ny laboratoara sy ny fizahan-tany eo ambanin'ny toe-javatra fametrahana samihafa dia manaporofo ny fanoherana ny loto amin'ny vy mavo izay tsara, raha tsy tsara noho ny vy vy vy. Ny fanoherana ny loto amin'ny fantsom-by vy ductile dia nohamarinin'ny serivisy fanompoana efa-polo mahery.